ရူဘင်ဒီယက်စ်က မန်စီးတီးခံစစ်ပြသာနာအတွက် အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်တစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်မလား? – MySport Myanmar
ရူဘင်ဒီယက်စ်က မန်စီးတီးခံစစ်ပြသာနာအတွက် အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်တစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်မလား?
ဒီနှစ်ဘောလုံးရာသီရဲ့ ပထမဆုံးသော ပရီးမီးယားလိဂ်အိမ်ကွင်းပွဲစဉ်အတွင်းမှာ ပြိုင်ဘက်လက်စတာအသင်းကို လုံးဝကို မဖြစ်သင့်တဲ့ ရလဒ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ (၂)ဂိုး(၅)ဂိုးနဲ့ အရှက်တကွဲ အရေးနိမ့်ပြီးနောက်မှာ ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်ဖြစ်နေရတဲ့ အသင်းရဲ့ခံစစ်အတွက် မဖြစ်မနေ ပြင်ဆင်မှုတွေ လုပ်ဆောင်ဖို့ လိုနေပြီဆိုတာကို သိလိုက်ရတဲ့ မန်စီးတီးအသင်းဟာ ဘင်ဖီကာအသင်းရဲ့ ပေါ်တူဂီနောက်ခံကစားသမား ရူဘင်ဒီယက်စ်ကို ပြောင်းရွှေ့ကြေး ပေါင်(၆၅)သန်းနဲ့ ခေါ်ယူလိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မန်စီးတီးကစားသမားသစ် ဒီယက်စ်က မန်စီးတီးရဲ့ခံစစ်ပြသာနာကို တကယ်ဖြေရှင်းနိုင်မယ့်သူ ဖြစ်လာနိုင်မလားဆိုတာကတော့…
Photo Credit : Forza Italian Football
ပေါင်(၆၅)သန်းလောက်အထိနဲ့ ခေါ်ယူခဲ့ရတဲ့ အသက်(၂၃)နှစ်အရွှယ် ပေါ်တူဂီလက်ရွေးစင် နောက်ခံကစားသမား ဒီယက်စ်ဟာ တကယ်တော့ မန်စီးတီးရဲ့ Main Target တစ်ယောက်မဟုတ်ခဲ့ပဲ နာပိုလီနောက်ခံလူ ကူလီဘလီ အသက်လက်တီကိုမက်ဒရစ် နောက်ခံလူယီမီနက်ဇ် ဆီဗီလာနောက်ခံလူ ကွန်ဒေတို့ကို မခေါ်ယူနိုင်ခဲ့လို့ ဒီယက်စ်ကိုပဲ ဖုတ်ပူမီးတိုက်နဲ့ ခေါ်ယူခဲ့့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ အလျင်စလို ခေါ်ယူခဲ့ရတာဖြစ်ပေမယ့်လည်း ဒီယက်စ်က မန်စီးတီးရဲ့ရေဒါထဲမှာ ပါဝင်ခဲ့ဖူးသူဖြစ်သလို ဂွာဒီယိုလာလက်ထက် ခေါ်ယူခဲ့ဖူးတဲ့ နောက်ခံလူတွေထဲမှာလည်း စျေးအမြင့်မားဆုံး ကစားသမားလည်း ဖြစ်နေပါတယ်။
Photo Credit : Super Sports
တကယ်တော့ မန်စီးတီးအသင်းဟာ အသင်းရဲ့ အဓိက ကစားသမားကြီးဖြစ်တဲ့ အသင်းခေါင်းဆောင်ဟောင်း ဗင်းဆင်ကွန်ပနီကို အသင်းကနေ လက်လွတ်ခဲ့ရပြီးနောက်မှာ သူလိုမျိုး ခံစစ်ကစားသမားကောင်းတစ်ယောက် ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်ကို ပြန်အစားမထိုးနိုင်ခဲ့တာက အသင်းရဲ့အဓိကပြသာနာ ဖြစ်သွားစေခဲ့တာပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာဆို မန်စီးတီးရဲ့လိဂ်ပွဲရှံးပွဲအရေအတွက်က (၉)ပွဲထိရှိခဲ့ရပြီး ခံစစ်အမှားတွေကြောင့် မဆုံးရှံးရသင့်တဲ့ အမှတ်တွေပါ ဆုံးရှံးခဲ့ရကာ ထိပ်ဆုံးနေရာက လီဗာပူးလ်နဲ့လည်း ရမှတ်ပေါင်း(၁၈)မှတ်အထိတောင် ကွာဟခဲ့ရပါတယ်။ အခု ဒီပြသာနာတွေကို ဖြေရှင်းဖို့အတွက် ပေါင်(၆၅)သန်းနဲ့ မန်စီးတီးကို ရောက်လာခဲ့တဲ့ ဒီယက်စ်က အသက်(၂၃)နှစ်သာရှိသေးတဲ့အတွက် ရေရှည်စီမံကိန်းအတွက် စိတ်ချရနိုင်တဲ့ အနေအထားမှာရှိနေသလို သူက ခေါင်းဆောင်အရည်အချင်းနဲ့ ပြည့်ဝသူတစ်ယောက်ဆိုတာကိုလည်း ဘင်ဖီကာနည်းပြကိုယ်တိုင် ဝန်ခံထားခဲ့ဖူးပါတယ်။ ခေါင်းဆောင်မှုကောင်းသလို ခံစစ်ပိုင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းတွေ ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး အရပ်အမောင်းမြင့်မားလွန်းတဲ့ ဒီယက်စ်က မန်စီးတီးခံစစ်အတွက် အမှန်တကယ်လိုအပ်နေတဲ့ Jig Saw တစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်မိပါတယ်။
MySport Myanmar2020-09-30T15:25:52+06:30September 30th, 2020|Football, Premier League|